I-Murdeira Bay Luanda, e-Ilha do Sal - I-Airbnb
I-Murdeira Bay Luanda, e-Ilha do Sal
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uStefan iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Iflethi encinci, etofotofo neqoqoshiweyo eMurdeira Bay. Ngaphaya kwesiphithiphithi kunye nezakhiwo ezinkulu zehotele phakathi kweSanta Maria ne-Espargos zibekwe lula. Imizuzu eyi-2 ukuya elunxwemeni, indawo yokutyela, ibhari kunye nemarike encinci. Akukho ngxaki.
Ndikunika iflethi okanye indlu yam ekwicomplex eyakhiwe ngo-2015 elungisiweyo yaza yafakwa abantu abayi-2. Iflethi ngokwayo inegumbi lokuhlala eliyi-kitchen, igumbi lokuhlambela elineshawa, igumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini enobubanzi obuyi-180 cm. Xa iceliwe, ikhothi yokuhamba inganikezelwa kubantwana abancinci ngaphandle kokubhataliswa enye imali. Ngokuqinisekileyo, akukho nto ifanele ingabikho, kodwa ukuba kunjalo, ndinganceda.
Idolophana encinci yaseMurdeira iphakathi kwesiqithi, phakathi kwedolophu yase-Espargos kunye ne-resort yabakhenkethi yaseSanta Maria. Ndiye ndahlala apha ukususela ngo- kwaye ndisaziva ndikhululekile. Inzuzo kukuba awubonakali ngokusisigxina kwindawo ephithizelayo, kodwa kusekho iindawo ezintle kakhulu kwesi siqithi. Unokuceba ngokulula izinto oza kuzenza emini ukusuka apha okanye ubeke iinyawo zakho phezulu uze wonwabele ii-sunsets ezintle kunye neCaipirinha kwibhari ekufutshane yepuli (uhamba imizuzu eyi-2).
Isuphamakethe encinci apha ngqo kwisayithi ikunika izinto eziyimfuneko.
Yintoni oyifumana kum njengeendwendwe zam ngolwazi lwam: Ziphi ezona ndawo zintle zokudayiva? Ndingayirenta phi i-quad efanelekileyo nekhuselekileyo ngexabiso elifanelekileyo? Ungayifumana phi ivenkile yokutyela entle kwiindlela zabakhenkethi, apho abantu basekuhlaleni bathanda ukutya khona? Ekubeni ndihlala kufutshane, ndihlala ndifumaneka xa kukho imibuzo kunye neengxaki.
Yintoni oyifumana kum njengeendwendwe zam ngolwazi lwam: Ziphi ezona ndawo zintle zokudayiva? Ndingayirenta phi i-quad efanelekileyo nekhuselekileyo ngexabiso elifanelekileyo? Unga…